Sidee Loo Dhaqaajiyaa Tubi TV - Tubi.tv/Activate (Diiwaangeli) - Madadaalo
Sidee loo Dhaqaajiyaa Tubi TV?
Barnaamijyada qulqulka ayaa ku jira dagaal joogto ah si ay u bixiyaan waxa ugu fiican iyo khibrada isticmaale. Si kastaba ha noqotee, badankood waxay leeyihiin adeeg gaar ah oo aan ku dayanin TV dhab ah. Cable TV si tartiib tartiib ah ayuu u sii yaraanayaa, laakiin waxaa jira shirkado qaarkood oo wali ka shaqeynaya sidii ay kuu siin lahaayeen khibrad u eg TV-ga.
Si aad TV-ga ugu keento qalabkaaga casriga ah, Tubi TV waa mid ka mid ah barnaamijyada cajiibka ah. Adigoon wax rukumasho ah lahayn, waxaad qulquli kartaa barnaamijyo TV-ga iyo filimada aan tiro lahayn. Weli waad heleysaa xayeysiisyada sida telefishanka. Si kastaba ha noqotee, waxaad leedahay awood buuxda oo ku saabsan waxyaabaha aad sii deynayso. Ergo, ma jiro waqti xaddidan oo ku saabsan socodka qulqulka.
Ka sii muhiimsan, dhammaantood waa bilaash! Marka sidee u isticmaali kartaa Tubi TV? Waa hawl toos ah! Aynu eegno waxa Tubi TV yahay iyo sida aad ugu adeegsan karto khibrada ugu fiican:
Waa maxay Tubi TV?
Tubi TV waa barnaamij ka socda Fox oo kuu keenaya xaqiiqada iyo waqtiga firaaqada ah ee telefishanka telefishanka ah taleefankaaga. Waxa loola jeedaa? Inkasta oo shirkadaha kale ay ka shaqeynayaan bixinta barnaamijyada u muuqda sida 'barnaamijyada', 'Tubi TV waxay u dareemeysaa sida TV-ga taleefankaaga.
Bixiyeyaasha kale waxay ka shaqeeyaan bixinta waxyaabaha ku jira khidmadda rukunka. Wadajir ahaan, tani waxay u horseedi kartaa kharash badan. Si kastaba ha noqotee, TubiTV waa hal xarun oo leh aruurinta TV-yada iyo filimada badan. Warka ugu fiican? Dhammaan waxyaabaha ku jira waxaa lagu heli karaa bilaash.
Muxuu Tubi TV Bixiyaa?
Tubi waxay leedahay interface si sahlan loo isticmaali karo oo ah furitaanka barnaamijka ama aado Tubitv.com, waxaad riixi kartaa 'bilawga daawashada' oo aad bilaabi kartaa isla markiiba barnaamijka. Waxaa jira aruurinta in kabadan 20,000 oo filim iyo taxane TV ah oo aad si bilaash ah ugu qulquli karto. Kaliya maahan bandhigyada TV-yada iyo filimada, waxaad sidoo kale marin u heleysaa kartoonno caan ah.
Waxay iskaashi la sameysay dhowr shirkadood oo wax soo saar sumcad leh sida Paramount, MGM, Warner Bros, iyo Lionsgate si ay kuugu keenaan nuxurka asalka ah iyo kan lacagta bilaashka ah. Laakiin su’aashu waxay tahay, sidee ayuu kuugu keenayaa nuxurkan bilaashka ah?
Xayeysiinta ka socota Tubi TV - Ma Jirtaa rukumo?
Si aan si bilaash ah kuugu soo bandhigno, Tubi TV waxay baahisaa xayeysiis. Taasi waa sida ay ula shuraakoobaan bixiyeyaasha kale isla markaana u bixiyaan bixinta waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Sidaa darteed, Tubi TV waa madal sharci ah oo aad kala soo bixi karto qalab kasta oo aad sii deyn karto iyada oo aan walwal sharci ah laga qabin.
Nasiib darrose, si loo ilaaliyo waxa ku jira gebi ahaanba bilaash oo aan noqonin shirkad macaash doon ah, Tubi ma bixiso rukhsad. Si kale haddii loo dhigo, ma jiro xirmo bille ama sanadle ah oo aad ka iibsan karto Tubi. Sidaa awgeed, ma joojin kartid xayeysiinta.
Marka la soo koobo, xayeysiintu waa waxa ka dhigaya waxa ku jira bilaash iyo sharci.
Dhignaashada Tubi TV:
Tubi ayaa laga heli karaa ku dhowaad goob kasta. Waxaad ku isticmaali kartaa taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada. Waxay taageertaa Android, iOS, iyo Roku. Waad ku qulquli kartaa waxyaabaha ku jira kombuyuutarka ama aalado kale, sidoo kale. Intaas waxaa sii dheer, TV-gaaga casriga ah wuxuu sidoo kale la shaqeeyaa barnaamijka. Intaas maahan! Haddii aad haysato qalabka ciyaarta, waad isticmaali kartaa sidoo kale.
Guud ahaan, Tubi guud ahaan waa la jaan qaadayaa wuxuuna kuu keenayaa fudayd soo degsasho. Waxaa laga heli karaa dhammaan dukaamada internetka sida Google Playstore, Apple Store, iyo Samsung Store. Haddii kale, waad booqan kartaa bogga rasmiga ah si aad u soo dejiso. Sidoo kale, waxay si fiican ugu shaqeysaa biraawsarkaaga bilaa qalab.
Sidee loo Isticmaalaa Tubi TV?
Si aad u isticmaasho Tubi TV, waad booqan kartaa https://tubitv.com/ ama ka soo degso barnaamijka dukaanka tooska ah ee tooska ah. Waa kuwan hagaha la socoshada:
Fur barnaamijka ama degelka shabakadda biraawsarka
Dhagsii 'bilaw daawashada,' waxayna kuu qaadan doontaa maktabadda
Halkaas waxaad ku leedahay ikhtiyaar baadhitaan, raadinta, inaad isdiiwaangeliso oo aad gasho
Waad sii dejisan kartaa adiga oo aan saxeexin adoo si fudud u riixaya thumbnail ee taxanaha TV-yada ama Filimmada sida ay u soo bixi doonaan
Interface wuxuu ku siinayaa ikhtiyaar aad u Chromecast ciyaaryahanka on TV iyo daawado halkaas.
Waxa kale oo aad dooran kartaa subtitles iyo tayada fiidiyowga. Waxaa jira waxyaabo HD ah oo bilaash ah oo bilaash ah.
Haddii aad rabto adeegyo shaqsiyeed, markaa diiwaangelintu waa doorashada ugu fiican.
Sidee Loo Diiwaangeliyaa Tubi TV?
Way fududahay in laga diiwaangaliyo Tubi TV. Raac talaabooyinkan fudud:
Waxaa jira ikhtiyaar diiwaan ah oo ku yaal geeska kore ee midig ee barnaamijka. Guji halkaa.
Waxaad u isticmaali kartaa Google ama Facebook inaad si otomaatig ah isu diiwaangeliso oo aad u gasho
Haddii kale, waad buuxin kartaa faahfaahinta oo waad iska qori kartaa adoo adeegsanaya habab gacan qabsi ah
Marka aad buuxiso macluumaadka oo aad diiwaangeliso, waxaad noqonaysaa xubin diiwaangashan
Markaa waad iska saxiixi kartaa adoo adeegsanaya Email iyo password
Talaabooyinka lagu dhaqaajinayo Tubi TV Qalabkaaga:
Khasab kuguma aha inaad gasho si aad u kiciso Tubi TV qalabkaaga. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad ka sii daayo Tubi TV-gaaga TV-gaaga, waad raaci kartaa hawsha laba-tallaabo ah.
Ku soo dejiso barnaamijka Tubi TV-ga TV-gaaga
Fur barnaamijka oo guji guriga
Ka imanaya guriga, guji Saxeex
Abka TV-ga ayaa soo bandhigi doona lambarka hawlgelinta
Ku qor nambarka hawlgelinta si sax ah
Tubi TV wuu howlgalin doonaa dhibaato la'aan
Viola! Waad ku dhamaysay hawshii Soo-galitaanka. Hadda waxaad qulquli kartaa on your TV dhibaato la'aan.
Macluumaadka laga heli karo Tubi TV waa mid sax ah oo si xirfadaysan loo soo saaray. Waxaa jira in ka badan 25 milyan oo isticmaale adduunka oo dhan. Iyada oo taageero laga helayo in ka badan 25 aaladood iyo awoodda ugu yar ee soo-saarid ah, waxaad haysataa madal madadaalo oo buuxda oo aad gacantaada ku hayso.
Haddii aadan rabin inaad lacag badan ku bixiso rukumo badan ama telefishanka fiilada, waxaad isticmaali kartaa barnaamijka Tubi TV. Si kastaba ha noqotee, kuma siinayso waxyaabaha ugu dambeeyay. Inta badan waxyaabaha ku jira waxaa loogu talagalay madadaalada asalka ah. Maaddaama adeeg bixiyeyaasha kale ay leeyihiin barnaamijyadooda, si lama huraan ah waa inaad iska qortaa iyaga si aad u hesho taxanaha ugu dambeeyay iyo filimaanta.
Tartanka barnaamijyada qulqulka tooska ah ee internetka, Tubi TV waxay u taagan tahay meel gooni ah. Ma jiraan barnaamijyo badan oo lamid ah. Sidaa awgeed, waxay u noqon kartaa ku dar qiimo leh ururintaada. Iyada oo la adeegsanayo is-dhexgal yar iyo qaab toos ah, sidoo kale waa ku darid aad u fiican shaqsiyaadka farsamada yaqaanka ah.
Sidee loo Dhaqaajiyaa Waqtiga Bandhigga Markasta?
Chromecast ee Windows 10
Sida loo Beddelaan M4A in MP3?
Lambarada Tusaha ee iPhone 12 (A2172, A2402, A2403, A2404)
waxa websites i daawan kartaa movies free
ka daawo filimka cusub ee bilaashka ah
ammaan movie buuxa online lacag la'aan ah
halkaas oo si aad u daawato taxane online
Waa ammaan ah si ay u daawadaan filimo online